Tag: Akwụkwọ akụkọ | Martech Zone
Tag: Akwụkwọ akụkọ
Ezigbo okwu: Wulite, Soro, Nnwale, ma nyochaa Mmemme Ntuziaka maka Ecommerce
Tuesday, January 30, 2018 Friday, February 2, 2018 Douglas Karr
Dabere na Okwu nke Mouth Marketing Association na-akọ na kwa ụbọchị na United States, enwere mkparịta ụka mkparịta ụka metụtara ijeri 2.4. Dabere na Nielsen, 90% nke ndị mmadụ tụkwasịrị obi na azụmaahịa sitere n'aka onye ha maara na ịzụ omume emetụtala mmekọrịta mmadụ na ibe ya kemgbe mmalite oge. Ogologo oge tupu netwọkụ mmekọrịta dịka Facebook na Twitter debere gị na akaghị aka, netwọkụ anụ ahụ gị nwere mmetụta na ihe ịzụrụ na ebe ị
NetLinePortal bụ n'efu B2B ndu usoro ikpo okwu ebe ụlọ ọrụ nwere ike ịmepụta mkpọsa syndication ọdịnaya iji mee ka mmata ma ọ bụ njide jidere. Usoro a na-enye onyinye abụọ dị iche iche: LeadFlow iji mepụta ndu, na-enye gị ohere ịmekọrịta ọdịnaya gị, tinye ihe nzacha na isi, na-agba ọsọ ahịa na akaụntụ, gbakwunye ajụjụ omenala, tinye usoro mmefu ego gị na oge, nweta akụkọ mkpọsa, ma nata ndu dị mma. Ihe na-amalite na $ 9 kwa ndu. ContentFlow iji mee ka ị mata banyere site na ịmekọrịta ọdịnaya gị na ịnweta mgbasa ozi
Nnukwu data na-ere ahịa na Real-Time
Tọzdee, Machị 3, 2016 Saturday, January 14, 2017 Chris Hoyt
Ndị ahịa na-achọ mgbe nile ịbịakwute ndị ahịa ha n'oge kwesịrị ekwesị - na ịme ya tupu ndị asọmpi ha. Site na ọbịbịa nke ịntanetị na nchịkọta oge, oge maka ịdị mkpa nye ndị ahịa gị na-agbada. Nnukwu data na - eme ahia ugbu a ọsịsọ, na - anabata ozi ma na - arụ ọrụ karịa ka ọ dịbu. Otutu ihe omuma na ike igwe site na igwe ojii, nke na-adiwanyewanye ma di onu ahia, putara nke a
Kedu ihe bụ Njikwa Ọdịnaya?
Bọchị Sọnde, Machị 8, 2015 Saturday, May 7, 2016 Douglas Karr
Anyị ga-ede ọtụtụ ihe gbasara ikike ọdịnaya, mana ịchọrọ iwebata echiche nke ụlọ ọrụ anyị na-etinye site n'enyemaka nke ndị mmekọ anyị na Metonymy Media na Dittoe PR. Ndabere na Nchịkwa Ọdịnaya Ihe ịma aka nke anyị na-aga n'ihu na ndị ahịa anyị bụ na ọ na-adịkarị ka enweghị usoro dịka ha na-ebuga ahịa ọdịnaya ha. Altimeter na-akọ na 70% nke ndị ahịa anaghị enwe agbanwe agbanwe ma ọ bụ